Ndakazvambura Friend Yangu Stella neMboro kwete zvekutamba!!! – Makuhwa.co.zw
Stella yaive shamwari yangu, Mwana aive akanaka iyeye. Akange atevera murume kuLondon ndokuwana aane mumwe mukadzi, akadzoka aine stress vakuru ndikamupa hangu a shoulder 2 cry on or mboro to comfort her.
Ndakashockwa pandakanzwa kuti akange aita 1 yr 6months asina kumbonzwa kunaka mboro. Ndakamupromisa mboro zvakasimba tiichiita hedu nyaya paApp. Akanditi aida kuti ndizomutora paairport ndoenda naye straight kulodge kunomusvira. Musi waakauya ndege yakasvika huri husiku and ndainge ndakatomirira kumupicka nekuenda naye kunomusvira.
Tichingopinda mulodge ndakavhara mawindow, ndaakuvhara door akandimbundira nekusri kwangu ndokundivhura zip achibva andiburitsa mboro panze ndokutanga kuibonyorabonyora achitambisa machende. Mwana aitoda mboro kwete zvekutamba. Ndakatendeuka ndokumupa kiss achibva anditora rwoko ndokupinza muskirt make. Ndakapinza rwoko mupanty make ndokunzwa beche ratotota jakwa chakwa chairo. Takabvisana hembe ndokurara pabed kuti andiyamwe mboro…..
Related Topics:Ndakazvambura Friend Yangu Stella neMboro